तनाव कसरी हटाउने? यस्ता छन् ११ उपाय :: स्वास्थ्यखबर :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
स्वास्थ्यखबर शनिबार, जेठ ७, २०७९, ०६:०२:००
तनावग्रस्त हुनुभयो भने यसले तपाईंको मन र शरीरलाई हानि पुर्‍याउँछ। तनाव निरन्तर लिने गर्नुभयो भने अनेक रोग लाग्ने जोखिम बढ्छ। त्यसैले तनाव घटाउन यस्तो उपाय अवलम्बन गर्नुस्ः
काममा कहिलेकाहीँ हामी यति लिप्त भएका हुन्छौँ कि विश्राम गर्न पनि भुल्छौँ। विश्राम कम भयो भने यसले तनाव उत्पन्न गराउँछ।
अनावश्यक विवादबाट टाढा रहनुस्
सरोकार नभएको विवादमा भरसक मुछिनु हुँदैन। यसो गर्दा अनावश्यक तनाव लिनुपर्दैन।
पुरानो कुरा बिर्सिन खोज्नुस्
कफी, चिया कम गर्नुस्
धेरै भावुक नहुनुस्
एउटा भनाइ छ– अतिले खती गर्छ। स–साना कुराले भावुक बनाउने गरेको छ भने तपाईं तनावग्रस्त अवस्थामा पुगिरहनुहुन्छ। यदि, आफू बढी नै भावुक छु जस्तो लाग्यो भने भावुक बनाउने कुराबाट अन्तै मन डुलाउने प्रयास गरेर यसलाई कम गर्न सकिन्छ।
डाक्टरसँग परामर्श लिनुस्
यदि तपाईंलाई बढी नै तनाव हुन्छ र यसले निदाउन नदिने गर्न थालेको छ भने डाक्टरसँग परामर्श लिइहाल्नुपर्छ। डिप्रेसन हुँदा पनि यस्तो अवस्था उत्पन्न हुन सक्छ। डिप्रेसन भएको रहेछ र समयमै औषधि खानुभएन भने तपाईंको मानसिक स्वास्थ्य अझ बिग्रिँदै जान सक्छ।
छदेखि आठ घण्टासम्म सुत्नुस्
नियमित व्यायाम गर्नुस्
योग, व्यायाम नियमित गर्ने गर्नुभयो भने शरीरमा अक्सिजनको ‘इन्टेक’ बढ्छ। रगतमा अक्सिजनको मात्रा बढ्यो भने यसले तपाईंलाई आलस्य, चिन्ता, तनावबाट मुक्त हुन मद्दत गर्छ।
धेरै रिस उठ्छ? यी पाँच खानेकुरा खानुस् रिस उठेको बेला खाना खानु नराम्रो त होइन, तर तरिका नपुर्‍याइ खाँदा भने शरीरमा बेफाइदा पनि पुर्‍याउँछ। यस्ता केही खानेकुरा छन्, जुन सेवन गर्दा भने रिस नियन्त्रण गर्न समेत सहयोग पुग्छ। ८ घण्टा पहिले
अनुसन्धानको दाबी: हेडफोनले विश्वभरीका मानिस बहिरोपनको शिकार भइरहेका छन् फ्रान्सको नेशनल इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ एण्ड मेडिकल इन्स्टिच्युटको अनुसन्धानमा फ्रान्समा चारमध्ये एक व्यक्तिमा श्रवण सम्बन्धी समस्या भइरहेको पत्ता लागेको छ। १४ घण्टा पहिले